भजनसंग्रह3ERV-NE - यो आफ्ना छोरो - Bible Gateway
भजनसंग्रह 2भजनसंग्रह 4
भजनसंग्रह3Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
यो आफ्ना छोरो अब्शालोम देखि भागेर जाँदा दाऊदको भजन हो।
3 हे परमप्रभु, मेरा शत्रुहरू धेरै छन्।
धेरै मानिसहरू मेरो विरूद्ध उभिएका छन्।
2 धेरै मानिसहरूले मेरो विषयमा कुरा गर्छन्।
तिनीहरू भन्छन्, “परमेश्वरले उसलाई बचाउनु हुन्न।”
3 तर, हे परमप्रभु, तपाईं मेरो ढाल हुनुहुन्छ।
परमप्रभु तपाईं मेरो आदर हुनुहुन्छ।
तपाईंले मलाई महान् बनाउनु भयो।
4 म परमप्रभुलाई प्रार्थना गर्नेछु
र उहाँले मलाई आफ्नो पवित्र-पर्वतबाट उत्तर दिनुहुनेछ।
5 म ढल्केर आराम गर्न सक्छु, अनि जान्दछु म उठ्ने छु।
किनभने परमप्रभुले मलाई ढाक्नु र रक्षा गर्नुहुन्छ!
6 मेरो वरिपरि हजारौं सिपाहीहरू हुन सक्लान्,
तर म ती शत्रुहरूदेखि डराउने छैन!
7 हे परमप्रभु, उठ्नु होस्!
हे मेरा परमेश्वर, मलाई बचाउनुहोस्!
यदि तपाईंले मेरो दुष्ट शत्रुहरूको गालामा हिर्काउनु मात्र भयो भने
तपाईंले तिनीहरूका सबै दाँत झारि दिनु हुनेछ।
8 हे परमप्रभु, विजय तपाईंको हो!
आफ्ना मानिसहरू प्रति कल्यानकारी हुनुहोस्।